Munaasabadda sanad-guurada saddexaad ee ka soo wareegtay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee 14kii Oktoobar 2017 ayaa maanta lagu xusay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
Munaasabad ka dhacday Tiyaatarka Qaranka ayaa waxaa ka qayb galay Ra’iisul wasaaraha Xukumada Faderaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo halkaasi ka jeediyay Khudbad uu kaga hadlay dhacdii 14 October 2017 iyo xusuusta ay ka reebtay dhibaadda gaartay dadkii halkaasi dhaawaca iyo dhibaatadu ka soo gaartay.
Rooble ayaa faray Culimada Soomaaliyeed in ay qayb ka qaataan in laga hortago waxyaabaha khatarta ku ah amaanka dalka.
Waxa uu sheegay in ay muhiimtahay in ciidanka amaanka ay garab ka helaan shacabka Soomaaliyeed si uu yiri “looga hortago weerarada Argagixisada” isaga oo sheegay in ay ka shaqaynayaan furitaanka wadooyinka Caasimadda oo qaarkood horay loo furay.
Waxa uu sheegay in ay Xukumadiisu diiradda saarayso sidii loo hubilahaa gawaarida qaraxyada lagu soo raro.
Maanta oo kale saddex sano ka hor waxaa Magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxii weynaa ee gilgilay Isgoyska Zoobe (14-kii, October 2017), ayna ku dhinteen boqolaal qof oo rayid ah.
Nin la socday gaari nooca xamuulka ee (TM-ka) loo yaqaano, lagana soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa isu qarxiyay Isgoyska Zoobe, xilli laamaha ammaanka la sheegay inay gaarigaasi ku daba jooggeen.
Jugtii xooganeyd ee qaraxaasi ayaa laga maqlay xaafadaha Magaalada Muqdisho, iyadoo bulshada Soomaaliyeed si weyn u xusuusan tahay wixii maalintaa dhacay.
Ka dib markii uu soo baxay warka sheegaya in qaraxaasi ku dhinteen dhawr boqol oo qof, dad kaloo fara-badana ay ku dhaawacmeen ayay dadweynaha reer Muqdisho bilaabeen inay buux-dhaafshaan goobaha caafimaadka, si ay dhiigoodu ugu deeqaan dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi, iyagoo markaasi ka jawaabaya baaqii ahaa in dhiig loo baahan yahay.
Marka laga soo taggo boqolaalka qof ee qaraxaasi ku dhintay, waxaa kaloo jiray dhismooyin ganacsi oo ku burburay, iyadoo dad hantiileyaal ahaa ay maanta qaarkood ka fara-maran yihiin.